Among Us Lockscreen Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao]
Mihevitra ve ianao fa mpankafy lehibe indrindra an'ny Imposter among Us? Raha eny, dia azonao atao angamba ny mahafantatra ny fampiharana fanamboarana farany. Raha tsy fantatrao izany, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Eo aminay Lockscreen dia ny rindrambaiko Android farany, izay manolotra fanaingoana avo lenta indrindra ho an'ny fitaovana Android anao. Manolotra rafitra hidin-trano, sary an-tsary, ary endri-javatra mahatalanjona maro hafa maimaim-poana.
Misy fialam-boly samihafa na zavatra manentana ny fanahy, izay mitaona aingam-panahy olona sy olona an-tapitrisany te-hampiasa zavatra mitovy amin'ny tena fiainany. Misy sarimihetsika malaza samihafa, izay mahatonga ny olona hahazo karazana entana samihafa mifandraika amin'ny sarimihetsika.
Toy izany koa, ny olona dia lasa mpankafy ny lalao. Noho izany, te hividy entana sy fampiharana samihafa ny olona, ​​​​izay mampiseho ny fahalianan'ny tsirairay amin'ny lalao ary mampahafantatra ny olon-kafa fa mpankafy ny lalao izy ireo. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity fampiharana ity ho an'ny vondrom-piarahamonina lehibe iray amin'ireo sehatra filokana tsara indrindra.
Eny, miresaka ny lalao Android tsara indrindra izahay, izay misy mpankafy an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Imposter eo amintsika no sehatra, izay ahitàn'ny olona ny toetrany sy ankafiziny ny lalao. Noho izany, te-hamboarina ny smartphone sy tablette Android anao mitovy amin'ny lalao ve ianao? Raha eny dia mijanona miaraka aminay ary hizaha ny momba an'ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny App Lockscreen eo amintsika
Izy io dia Android Personalization Application, izay manolo ny fanovana ny fitaovanao Android ho fihetsika mitovy amin'ny Imposter eo aminy. Izy io dia manome ny valiny fanidiana efijery samihafa, ny wallpaper, ny effets, ny feo, ary ny endri-javatra mahatalanjona kokoa, izay ahafahan'ireo mpampiasa manamboatra ny fitaovany.
Hanomboka amin'ny rafitra hidin-trano isika, izay ahafahan'ireo mpampiasa mahazo teny miafina dimy isa. Voaro mafy ny tenimiafina ary tsy misy fiovana amin'ny famakiana ny teny miafinao, izay midika fa ho voaro daholo ny angona angoninao. Noho izany, mety ho tianao ny hahafantatra izay hitranga amin'ny fampiasana passcode diso?
Raha diso ny tenimiafina nampiasain'ny mpampiasa, dia misy fiantraikany amin'ny horonan-tsary misy. Azonao atao ny mametraka effet vidéo ho an'ny code diso ary apetrakao. Amin'ny fampiasana kaody diso, dia ho alefa sy hiseho eo amin'ny efijery ny vokatry ny horonan-tsary. Hahatonga ireo mpampiasa sandoka ho gaga amin'ny vokatry ny fitaovanao izany.
Ny feo no fomba tsara indrindra, izay ahafahanao manome paozy famoronana fanampiny ho an'ny fitaovanao. Misy feo hafa, misy amin'ny lalao, toy ny feon'ny fanokafana varavarana mihidy, fanoratana feo, sy ny maro hafa. Toy izany koa, ireo feo rehetra ireo dia hita ao amin'ity lalao ity, izay ahafahan'ny mpampiasa mamela mora foana ireo feo rehetra ireo ary manome ny fikitika.
Te hampiasa ny fanaingoana ny Among Us Custom Lockscreen koa ny olona, ​​fa tsy te hampiasa ny rafitra hidy. Noho izany, azonao atao ny mamela sy manafoana ny rafitry ny hidin-trano mora foana. Manome anao hampiasa ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fitaovana ianao ary avelao hitovy ny zavatra hafa.
Ny fanangonana temotra dia endri-javatra tsara indrindra amin'ity rindranasa ity, izay manolotra fitambarana sary miharo famaritana avo lenta. Ny sary an-tsehatra rehetra dia mifandraika amin'ny lalao, izay mampitombo ny fahaiza-mamorona anao amin'ny fampiasana ity app ity. Misy endri-javatra bebe kokoa ihany koa ao.
Raha te hijery ny endri-javatra sy serivisy rehetra misy ianao dia mila misintona Among Us Custom Lock Screen ary apetraho amin'ny fitaovanao. Afaka miditra maimaim-poana amin'ny endri-javatra maro isan-karazany ianao amin'ny fanaovana manokana an'ity fampiharana ity. Raha mila fampiharana sy hacks mahavariana kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay.
anarana Eo aminay Lockscreen
Anaran'ny fonosana amonguslock.amonguslockscreen.amonglock
Ovao ny fitaovanao araky ny lalao
Fanangonana tsara indrindra an'ny Wallpaper
Misy ny effets vidéo
Fehezo ny fikirana rehetra
Manaova fanovana arakaraka ny fonao
Ads Blocker amin'ny Premium Version
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mandany fotoana amin'ny fitsidihana tranokala samihafa ianao. Hanome ny fomba haingana indrindra izahay, izay ahafahanao misintona ity fampiharana ity. Mila mitady ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay hita eto amin'ity pejy ity ary tsindrio izany. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fampidinana.
Among Us Lockscreen Apk no fampiharana fanamboarana tsara indrindra, izay ahafahanao mamadika mora foana ny fitaovanao ho lalao tianao indrindra. Noho izany, alaivo fotsiny ity fampiharana ity ary avelao ny endri-javatra rehetra misy azy. Raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Sokajy Apps, Personalization Tags Eo aminay Lockscreen, Eo aminay Lockscreen Apk, Eo aminay Lockscreen App Post Fikarohana